အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကုန်သည်လက်ဝယ်၌ ကြက်သွန်နီ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်မှုပမာဏအား အစိုးရက လျော့ချကန့်သတ်ခြင်း | consumer
Home » ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသတင်းများ » အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကုန်သည်လက်ဝယ်၌ ကြက်သွန်နီ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်မှုပမာဏအား အစိုးရက လျော့ချကန့်သတ်ခြင်း
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကုန်သည်လက်ဝယ်၌ ကြက်သွန်နီ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်မှုပမာဏအား အစိုးရက လျော့ချကန့်သတ်ခြင်း
ပြည်တွင်းလက်လီ‌ဈေးကွက်တွင် ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်းများ တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာခဲ့ရာ သိုလှောင်ဈေးကစားမှုများအား တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ကုန်သည်များလက်ဝယ်၌ သိုလှောင်ထားရှိနိုင်မည့် ကြက်သွန်နီပမာဏအား ကန့်သတ်ခြင်းကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်း၌ အိန္ဒိယအစိုးရက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လက်လီရောင်းချသူများ၏ ကြက်သွန်နီလက်ဝယ်ထားရှိနိုင်မှုကို ၁၀ တန် မှ ၅ တန်သို့ လည်းကောင်း၊ လက်ကားရောင်းချသူများ၏ သိုလှောင်နိုင်မှုကို တန် ၅၀ မှ ၂၅ တန် သို့လည်းကောင်း လျော့ချသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက်မြင့်တက်မှုရှိနေသဖြင့် လက်လီရောင်းချသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့လက်ဝယ်တွင် ကြက်သွန်နီ ၂ တန် ထက် ပိုမိုသိုလှောင်ခြင်းမပြုရန် အိန္ဒိယ စားသုံးသူရေးရာဝန်ကြီးဌာန မှ ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယပတ်၌ ညွှန်ကြားချက် ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ် မိုးရာသီကာလအတွင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများကြောင့် ကြက်သွန်စိုက်ခင်းများ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျလျက် ရောင်းလိုအားနည်းပါးခြင်းက လွန်ခဲ့သော ၂ လတာအတွင်း ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ စာရင်းများအရ ၉.၁၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကြက်သွန်နီ လက်လီအမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်းမှာ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ၁၆၅ ရူပီးရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်း ပျမ်းမျှလက်လီဈေးနှုန်းမှာ ရူပီးငွေ ၁၀၀ ခန့် ရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သည့် ကြက်သွန်နီကို သုံးစွဲလေ့ရှိသော အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မဟာရတ္ထရပြည်နယ် Solapur မြို့တွင် ကြက်သွန်နီထိပ်စ လက်လီဈေးမှာ ၁ ကီလိုဂရမ်လျှင် ရူပီး ၂၀၀ အထိ ဈေးမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
ပြည်တွင်း၌ အဓိကစားသုံးကုန်တစ်ရပ်ဖြစ်သော ကြက်သွန်နီလိုအပ်ချက် မြင့်တက်နေမှုအပေါ် ပြည်ပမှ ကြက်သွန်နီ ၁.၂ သိန်း တင်သွင်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယအစိုးရက နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော သတ္တုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်းကုန်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MMTC) သို့ ညွှန်ကြားထားပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင် တူရကီနှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့မှ ကြက်သွန်နီတန်ချိန် ၂၁၀၀၀ တင်သွင်းရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားရှိပြီးဖြစ်သည်။ Bussiness Standard သတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရ တမီနာဒူးပြည်နယ် Tiruchi ဆိပ်ကမ်းမြို့၌ အီဂျစ်နိုင်ငံမှ တင်ပို့သော ကြက်သွန်နီတန်ချိန် ၃၀ လက်ခံရရှိပြီး ဈေးကွက်သို့ ဖြန့်ဖြူးခဲ့ရာ လက်လီဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၁ ကီလိုလျှင် ရူပီး ၁၀၀ သို့ လျော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာမည့် ကြက်သွန်နီများမှာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းသို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ လလယ်ပိုင်းခန့်မှသာ အပြည့်အဝရောက်ရှိ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ကြက်သွန်နီလိုအပ်ချက်မှာ ဒီဇင်ဘာလ စတုတ္ထပတ်အထိ မြင့်တက်လျက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သည်များက ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။
Source: 1. Govt further caps stock limit on onion retailers to2tons to check hoarding,9Dec 2019, Economic Times
2. The tear-jerker: Onion prices cross Rs 200/kg,7Dec 2019, Economic Times
3. Government orders import of 4000 tonnes onions,4Dec 2019, Economic Times
4. Onion prices come down in Tamil Nadu after 30 tonnes import form Egypt, 10 Dec 2019, Bussiness Standard
“ ပေါ်ဦးပေါ်ဖျား ပဲတီစိမ်း ဈေးကွက် ”
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ လယ်ယာထွက်ကုန်သီးနှံများ၏ ဈေးနှုန်း/ဈေးကွက်နှင့် အခြားစီးပွားရေးသတင်းများ
ပြောင်းသီးနှံ ထုတ်လုပ်မှု၊ စျေးနှုန်း၊ စျေးကွက် အခြေအနေ လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း
ဆန်၊ ဆန်ကွဲ ထုတ်လုပ်မှု၊ ဈေးနှုန်း၊ဈေးကွက် အခြေအနေလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း